5g Cream 3500.0 Ks
Snail Mucus - Snail Mucus က အရေပြားကို အပြည့်ဝဆုံးအာဟာရဓါတ်နှင့် အစိုဓါတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးသည်။ Vita Collagen - အသားအရေတင်းရင်းမှုအတွက် အဓိကလိုအပ်သော ကိုလာဂျင်ပြည့်ဝစွာ ထည့်သွင်းပေးထားသောကြောင့် အရေးအကြောင်းများကို သိသာစွာပျောက်ကင်းစေပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းနုပျိုစေသည်။ Protein, Vitamins - အသားဓါတ်နှင့် Vitamin များက အရေပြားအသစ်ထွက်ပေါ်မှုကို အားပေပြီး အိုမင်းပျက်ဆီးနေသော အရေပြားဆဲလ်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ Antioxidants - အစွမ်းထက် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြားအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အမည်းကွက်၊ အမည်းစက်များ၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်များကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးသည်။ အသားအရေကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ paraben, mineral oil, benzophenone, alcohol, phenoxyethanol, synthetic perfume များ လုံးဝမပါဝင်ပါ။
အရမ်းကြိုက်တယ် ခရီးသွားလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါယသယ်သွားလို့ရတယ်
ခုသုံးနေပါတယ် ဖွေးသွားတယ် ကြိုက်တယ်
အရွယ် (၃) ပါးမရွေး အားလုံးအတွက် New Skiin 🥰 New Skiin All In One Tone Up Cream ကို ပျိုပျို၊ ကိုကိုတွေ မက ဦးဦးဒေါ်ဒေါ် အရွယ် (၃) ပါးမရွေး အားလုံးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ☀️ မနက်တစ်ကြိမ် 🌙 ညတစ်ကြိမ် လိမ်းရုံနဲ့ အသားအရေကို အစိုဓါတ်ရော အာဟာရရော ဖြည့်တင်းပြီး အစွမ်းထက် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေက အရေပြားအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အမည်းကွက်၊ အမည်းစက်များ၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်များကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ သဘာဝထွက်ပစ္စည်းများနှင့်သာ ထုတ်လုပ်ထားလို့ Sensitive Skin များပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ New Skiin All In One Tone Up Cream (5 g) တစ်ထုပ် - ၃,၅၀၀ ကျပ်
အခုထိ ??? ???? လေး မဖြစ်သေးဘူးလား ? ၂၀၂၁ လဲ ကုန်တော့မယ် အခုထိ အသားအရေအသစ်လေး မဖြစ်သေးဘူးလား❓ ??? ???? လေးဖြစ်ဖို့ဆို ??? ????? ??? ?? ??? ???? ?? ????? ကို သုံးပေးနော် ☺️ ??? ????? ????? မှာ ပါဝင်တဲ့ ???????, ??????? များက အရေပြား အသစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို အားပေးပြီး အိုမင်းပျက်စီးနေတဲ့ အရေပြားဆဲလ်များကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ နေလောင်ကွက်များ၊ အမဲစက်များနှင့် ဝက်ခြံအမာရွတ်များကိုပါ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးပြီး နှစ်သစ်မှာ အသားအရေအသစ်လေးကို ကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင်နော် New Skiin All In One Tone Up Cream (5 g) တစ်ထုပ် - ၃,၅၀၀ ကျပ်
? ဘယ်သွားသွား အလွယ်တကူ ဆောင်သွားလို့ရတဲ့ New Skiin ? လိမ်းလိုက်တာနဲ့ အသားအရေကို ချက်ချင်းဖြူဝင်းစေပြီး ? Snail Mucus က သင့်မျက်နှာအသားအရေကို အစိုဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးတာကြောင့် မျက်နှာလေး ဝင်းပပြီး Glow Skin ကို ရရှိစေပါတယ်။ Primer အနေနဲ့လည်း မိတ်ကပ်မလိမ်းမီ အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင် မိတ်ကပ်ကြောင့် အသားအရေ ပျက်စီးမှုကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ တစ်မျိုးထဲနဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ New Skiin All In One Tone Up Cream (5g) အထုတ်လေးက ခရီးသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သယ်ဆောင်ရ လွယ်ကူလို့ ဘယ်သွားသွား သင်နဲ့အတူ ရှိနေမှာပါ။ New Skiin All In One Tone Up Cream (5 g) တစ်ထုပ် - ၃,၅၀၀ ကျပ်
မျက်နှာလေး ဖြူဝင်းလှပချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လက်ဆောင် ? ? ကိုယ့်လိုပဲသူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ လှစေချင်တယ်ဆိုရင် New Skiin All In One Tone Up Cream ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်နော် ? ? New Skiin Cream က အသားအရေကို ချက်ချင်းဖြူဝင်းစေပြီး အစိုဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ အသားအရေကို တင်းရင်းစေပြီး အရေအကြောင်းများကို သက်သာပျောက်ကင်းကာ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုလဲ တားဆီးပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တင်းတိပ်။ မှဲ့ခြောက် နှင့် အမဲစက်များ၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်များကိုလည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေတာကြောင့် နုပျို၊ တင်းရင်း၊ ဝင်းပ နေစေမှာ အသေအချာပဲနော် .... မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် New Skiin Foam Cleanser နှင့် မျက်နှာသစ်အပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Primer အနေနဲ့လည်း မိတ်ကပ်မလိမ်းမီ အသုံးပြုပေးခြင်းအားဖြင့် မိတ်ကပ်ကြောင့် အသားအရေ ပျက်စီးမှုကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ New Skiin All In One Tone Up Cream (5 g) တစ်ထုပ် - ၃,၅၀၀ ကျပ်
နေ့ရက်တိုင်း မရှိမဖြစ် New Skiin ? New Skiin All In One Tone Up Cream က Skin Care အနေနဲ့ပဲ သုံးသုံး သနပ်ခါးလေးနဲ့ပဲတွဲလိမ်းလိမ်း Primer အနေနဲ့ပဲ သုံးသုံး အဆင်ကိုပြေနေရောနော် ? Primer အနေနဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင်လဲ မိတ်ကပ်ကြောင့် အသားအရေ ပျက်စီးမှုကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ New Skiin Cream ကို ရေရှည်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အသားအရေလေး စိုပြေ တင်းရင်းချောမွေ့ နုပျိုစေပါတယ်။ နေလောက်ကွက်များ အမဲစက်များနှင့် ဝက်ခြံအမာရွတ်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးပဲ လိမ်းလိမ်း ထိရောက်တဲ့ အကျိုးအာနိသင်ရှိတဲ့ New Skiin Cream ကို အခုပဲ သုံးလိုက်ကြတော့နော် ? New Skiin All In One Tone Up Cream (5 g) တစ်ထုပ် - ၃,၅၀၀ ကျပ်